OMC ဖိအားဓာတ်ဆီဆီတိုင်ကီ | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
အဘို့ကို eBay စျေးဝယ်ဖို့ဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ Evinrude/ ဂျွန်ဆင် Dual-ဆီလိုင်းများနှင့် tank
အသက်ကြီး OMC Motors ကတွင်အသုံးပြုဖိအားဓာတ်ဆီလောင်စာ tank အကြောင်းတစ်ဦးကသတိပေး
ဤရွေ့ကားမော်တာ Cruis-a-Day ကို tank အဖြစ်လူသိများဖိအားပေးထားတဲ့လောင်စာကန်များ, ကိုအသုံးပြုပါ။ ယင်းအစားအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့ကနေလောင်စာနို့စို့ထက်, dual-line ကိုရေပိုက်ပြန်မော်တာမှလောင်စာဆီတွန်းအားပေးရာ 4-7 PSI ကဖိအား, အအကြံပေးအဖွဲ့သို့လေကြောင်းညှစ်ထုတ်လိုက်။ အခြေခံအားဖြင့်ဤဖိအားင့်ကားများအနေနဲ့အလွန်အမင်းအန္တရာယ်များမီးသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ OMC နောက်ဆုံးတော့ 1959 ပြီးနောက်, ဤတင့်ကားကို အသုံးပြု. ရပ်တန့် ..
သင်တို့သည်ဤတင့်ကားများထဲမှရှိပါကယင်းရေပိုက်နှစ်ခုလိုင်းများသည်မော်တာမှလောင်စာဆီကယ်နှုတ်တော်မူရန်လောင်စာဆီတိုင်ကီသို့လေကြောင်းစုပ်နှင့်အခြားသောတရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ တင့်ကား၏ဤအမျိုးအစား OMC နှင့်အတူထွက်လာသနှင့်၎င်း၏နေ့ရက်ကာလ၌နည်းပညာအသစ်သောပထမဦးဆုံးအပြင်လောင်စာဆီတိုင်ကီဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်ပြီးတာနဲ့လှေမော်တာထုတ်လုပ်သူအများကြီးပိုလုံခြုံသောအရာတစ်ခုတည်းလိုင်းလောင်စာစုတ်ယူခြင်းစနစ် switched ။
ဖိအား Tank Connector
5 ဂါလန်ဖိအားဆီ Tank
သူကတောင်လာသောအခါသစ်ကိုကဤတင့်ကား, စနစ်တကျတံဆိပ်ခတ်ထားရခက်ခဲသည်။ အဆိုပါတင့်ကားယိုစိမ့်နေလျှင်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံသင့်ရဲ့လှေထဲသို့နှင့်လေထုထဲသို့လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးသွင်းယူဆလင်ဒါရှိပါကဤမော်တာ (အပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွင်းမီး) ဖမ်းဆုပ်ခြင်းနှင့်လောင်စာလိုင်းဆင်းနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့သို့ဖိအားအတင်းနိုင်ဘူး။ ဒါကထုပ်ဟာကျေးဇူးချွတ်မှုတ်ခြင်းနှင့်လေထုထဲသို့ 20 ခွကေိုထရိုက်စေသိပြီးပါပြီ! ဤသည်နှာချေလည်းသင့်ရဲ့လောင်စာဆီတိုင်ကီလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်း rupture မှလောင်စာဆီလိုင်းများစေလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျရေပေါ်မှာထွက်ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင့်တင့်ကားဖိအားကျင်းပရန်ပျက်ကွက်လျှင်, သင့်မော်တာကို run ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း carburetor များ၏အဆင့်ကိုအထက်အကြံပေးအဖွဲ့တက်ကိုင်နှင့်မော်တာမှလောင်စာဆီဆွဲငင်အား feed ကိုရစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤရွေ့ကားတင့်ကားလုပ်ကိုင်ရန်ရိုးရှင်းသောကြဘူး။ သင်မော်တာမစတင်မီလက်စုပ်စက်နှင့်အတူအကြံပေးအဖွဲ့ဖိအားပေးရန်ရန်ရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်းပိတ်ဦးထုပ်ကိုယူပြီးရှေ့တော်၌ထိုတိုင်ကီ depressurize ရန်ရှိသည်။
သင်တို့သည်ဤအဟောင်းများကိုဖိအားင့်ကားများထဲကတစ်ခုရှိပါကအခွင့်အလမ်းတွေကိုကကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နေဆဲယနေ့ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်သောဤတင့်ကားပေါ်တွင် gaskets နှင့်ဖျံပြုပြင်ရရှိနိုင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လက်ရှိတိုင်ကီပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ် OMC ယနေ့အသုံးပြုလောင်စာဆီစုပ်စက်နှင့်အလိုင်းအမျိုးအစားမှပြောင်းလဲဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လူပျိုလိုင်းဆီ Pump စုတ်ယူခြင်း Tank System ကိုမှနှစ်ဦးလိုင်းဖိအား Tank စနစ်ကနေပြောင်း
ဒီပြောင်းလဲခြင်းအောင်ဘို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်ပြီးသားသင့်ရဲ့ carburetor ညှိတက်ဘို့ရွှေ့ပြီအထူးသဖြင့်လျှင်, မျှမျှတတရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ယင်းပစ္စည်းများသည်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
မဆိုအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုစတိုးဆိုင်မှာရရှိနိုင်လေဟာနယ်လိုင်းရေပိုက်၏အကြောင်း6ပေ။
Mikumi လူပျို Carburetor Pump
3 သို့မဟုတ်4ဇစ်ဆက်ဆံရေး
လူပျိုလိုင်းဓါတ်ငွေ့ Tank နှင့် Hose
Mikumi carburetors နှင့်လောင်စာပန့်များအောင်နှစ်ပေါင်းန်းကျင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သူတို့၏လောင်စာသွားလာရင်း-လှည်းပေါ်တွင်အသုံးပြုပန့်များ, Ultra-အလင်းလေယာဉ်ပျံများနှင့်အသေးစားအင်ဂျင်ပါဝင်သောများစွာသောအခြား application များအများကြီးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်လောင်စာဆီစုပ်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်သွားလာရင်း-လှည်းဆိုင်မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည် $ 22.00 များအတွက် On-line ကိုဒီတစ်ခုဝယ်ယူခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့ Evinrude နှင့်ဂျွန်ဆင်မော်တာများအတွက်အများစုမှာလောင်စာပန့်များဟာ crankcase တိုက်ရိုက် mount ။ ဒီ 5.5 HP ကမော်တာ၏ဖြစ်ရပ်မှာလောင်စာဆီစုပ်စက် mount ဖို့ရာမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော 7.5, 10, ဒါမှမဟုတ် 18 HP က con အဖြစ်ပိုကြီးတဲ့မော်တာတစ်စတော့ရှယ်ယာ OMC လောင်စာဆီစုပ်စက်ကဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
Mikumi Pulse ဆီ Pump activated
ဤသည်လောင်စာဆီစုပ်စက်ကမော်တာကနေရရှိသွားတဲ့ကြောင်းလေဟာနယ်သွေးခုန်နှုန်းအားဖြင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဤသည်လေဟာနယ်ဟာမော်တာများကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နှင့်စုပ်စက်အပေါ်ဗဟို connector ကိုတွဲနေတဲ့ရေပိုက်ကနေတဆင့်ဘုံဘိုင်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနှစ်ဦးကို connectors ဓာတ်ငွေ့အကြံပေးအဖွဲ့သို့မဟုတ်လောင်စာ connector ကို (အတွင်းညွှန်ပြ arrow) နှင့် (အထဲကညွှန်ပြမြှား) ကို carburetor သွားလိုင်းသွားလိုင်းဘို့ဖြစ်ကြ၏။
အဆိုပါ Carburetor Remove ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါ carburetor ဖယ်ရှားခြင်းအပေါ်ညွှန်ကြားချက်ကိုတွေ့မြင်ရန်။
သင် carburetor နောက်ကွယ်မှတည်ရှိသောစားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားအဖုံး, ဖယ်ရှားရန်လျှင်, သင်ကသူတို့ကိုကျော်ရော်ဘာခတ်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုတွင်းမြင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါခတ်လေထုဟာ crankcase ကနေအပြင်သွားလာရသောစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကအကြံပေးအဖွဲ့ဖိအားပေးရန်ဖို့ dual-လောင်စာလိုင်း၏လိုင်းတဦးတည်းကိုဆင်းသွားလာရန်အပြုသဘောလေထုဖိအားဖန်တီးပေးပါတယ်။ နွေဦးကိုင်ထားနှစ်ခု screw နှစ်ခု Remove နှင့်အဆို့ရှင်စစ်ဆေးပါ။ ဤအတွင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ခုသံသရာမော်တာအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ crankcase အခန်းထဲသို့ဝင်။
တစ်သွေးခုန်နှုန်းလေဟာနယ်ရနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးလေဟာနယ်လိုင်း plug ကို၏အစွန်အဖျားနှင့်အတူတွင်းတဦးတည်းတက် plug ။ ဒါဟာအနေအထားထဲကမကျစေခြင်းငှါဒါစားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားအဖုံးအရပ်ဌာန၌ plug ကိုကိုင်ထားလိမ့်မယ်ဒါမှလေဟာနယ်လိုင်း plug ကိုရဲ့အရှည်ကိုချုံ့။ ယင်းစားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားအဖုံးအစားထိုးလိုက်ပါ။
တစ်အသစ်များတစ်ခုတည်းလိုင်းလောင်စာ connector ကိုအတူဟောင်းကို dual လောင်စာလိုင်း connector ကိုအစားထိုးပါ။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည် $ 6.00 အဘို့အကြှနျုပျ၏ဒေသခံလှေဆယ်တင်ခြံမှာတစ်ခုတည်းလိုင်းလောင်စာ connector ကိုရနိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့မှာလည်း OMC အစိတ်အပိုင်းများကိုကုန်သည်တွေကနေရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျကိုအောကျတှငျပုံအဟောင်းနှင့်အသစ်လောင်စာ connectors တွေ့နိုင်ပါသည်။ (လက်ဝဲဘက်) ကိုသစ်ကို connector ကိုနှစ်ခုသာ prongs ရှိပါတယ်။ ယင်းစားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားအဖုံးပေါ်တွင် connector ကိုမှလေဟာနယ်လိုင်း၏2ခွကေိုပူးတွဲ။
လောင်စာလိုင်း connector ကိုဖို့လုပျသောသူဖွလက်မောင်းအခြေစိုက်စခန်းမှတစ်ဆင့်သွားနှစ်ခုဟောင်းလိုင်းများ Remove နှင့်အသစ်သောလောင်စာဆီစုပ်စက်ဖို့လောင်စာ connector ကိုကနေသွားပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုတည်းလိုင်းနှင့်အတူအစားထိုးလိုက်ပါ။ လောင်စာဆီစုပ်စက်မှလှည့်ပတ်လမ်းကြောင်းမှလိုင်း၏2ခွကေိုအကြောင်းကို Allow ။
အဆိုပါ Carburetor ကိုအစားထိုး ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါ carburetor ကို install ညွှန်ကြားချက်ကိုတွေ့မြင်ရန်။ လောင်စာဆီစုပ်စက်မှလှည့်ပတ်ရှုံးဖို့ carburetor မှလေဟာနယ်လိုင်း၏2ခွကေိုပူးတွဲ။
လမ်းကြောင်းသင့်ရဲ့လေဟာနယ်သွေးခုန်နှုန်းလိုင်း, carburetor လိုင်းနှင့်လောင်စာ connector ကိုလိုင်းကျွန်မဘေးက crankcase ဖို့ကြားပြောင်းကုန်ပြီလီဗာတက်နောက်ကွယ်မှနေရာဖြစ်သောလောင်စာဆီစုပ်စက်မှလှည့်ပတ်။ အဆိုပါလိုင်းများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်လောင်စာဆီစုပ်စက်ကိုချိတ်ဆက်မဆိုပိုလျှံအရှည်ကိုချုံ့။ ဤအလိုင်းများ routing ဘယ်အချိန်မှာမဆိုရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ, ဒါမှမဟုတ်ချိတ်ဆက်ထံမှလမ်းသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ အဆိုပါ cowling ရုံအသစ်ရဲ့လောင်စာဆီစုပ်စက်ကျော် fit သငျ့သညျ။ သူတို့အရပ်ဌာန၌နေထိုင်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်လိုင်းများ secure မှဇစ်ဆက်ဆံမှုကိုသုံးပါ။